Website cajiiba oo nolosha iyo jaceylka ka faallooda oo soo shaac baxay (Booqo) - Caasimada Online
Home Warar Website cajiiba oo nolosha iyo jaceylka ka faallooda oo soo shaac baxay...
Website cajiiba oo nolosha iyo jaceylka ka faallooda oo soo shaac baxay (Booqo)
Waxaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada daneeya arimaha bulshada lagu wargelinayaa inuu hawada soo galay Website cajiib ah oo ka hadla dhammaan arrimaha bulshada noocyadooda kala duwan oo lagu magacaabo Www.aayaha.net.
Website-ka Www.aayaha.net, oo ah mid waxyaabo badani ay ka kororsan karaan dhallinyarada iyo lamaanayaasha isjecel isla markaana ay qoraan inkabadan 5 wariye oo qibrad u leh arrimaha bulshada, ayaa waxa uu ka hadlaa arrimahan soo socda ee hoos ku qoran:
1- Arrimaha jacaylka
2- Kobcinta Qoyska
4- Sheekooyin jacayl, geeraaro jacayl iyo dhambaallada jacaylka
5- Talooyin jacayl
6-Casharro la xiriira nolosha sariirta ee lamaanayaasha.
Www.aayaha.net, – waxaad sidoo kale ka heleeysaa talooyin caafimaad oo ku anfacaya.
Qoraallada heesihii ugu dambeeyay ee ay dhallinyarada aadka u xiiseeyaan.
Booqo oo goor walba ku xirnoow www.Aayaha.net, Hoyga Arrimaha Bulshada.
Si aad u booqato halkan click sii